imbuyekezo - Amandla.mobi
Sifuna imbuyekezo zabasebenzi kunye neentsapo zabo basweleka eMarikana!
Njengoko izigidi zabantu boMzansi-Afrika uphela bezilungiselela ukubukela iMiners Shot Down ku-etv, eziveki zilandelayo ziyakusibonisa ukuba abahlolokazi baseMarikana bayakukwazi na ukondla iintsapho zabo ukuya phambili. Ekupheleni kukaJanyuwari, uRhulumente uzakuqala ingxoxo ngokubuyekezwa kweentsapho nabasebenzi mgodini. Njengoko kwafumaniseka ukuba ngamapolisa abulala abasebenzi mgodini, uMongameli Zuma sele ecacisile ukuba uhambisana "nembuyekezo ekhawulezileyo kwabo bafake izicelo ezinyanisekileyo" . Kodwa emva kweminyaka emithathu belindile, iintsapho zabo babulawayo kwakunye nabasebenzi mgodini abasindayo abakayazi ukuba bayakubuyekezwa nini okanye malini.
Kweziveki zilandelayo iinkokheli zethu masizazise ukuba thina bantu sima neentsapho ezonzakaliswa yile ntlekele. Sibambene singanyanzelisa uRhulumente ukuba akhawulezise alungiselele izicelo ezifakwe ziintsapho kunye nabasebenzi mgodini kungekathathwa izinyathelo zomthetho. Siphinda sinyanzelise ukuba inkampani ka Lonmin ibuyise zonke izimali zerhafu ezinyebelezise kumazwe angaphandle khon'ukuze kubuyekezwe iintsapho nabasebenzi mgodini nangenxa yenxaxheba yayo ekuxhatshazweni kwabasebenzi nasekuphembeleleni le ntlekele yenzekayo.
Ngonyaka ophelileyo, amalungu e-amandla .mobi akhankhasela ukuba uMongameli Zuma akhuphe ingxelo yaseMarikana khon'ukuze amagqwetha kwakunye namalungu eentsapho zabo babulawayo eMarikana, babenexesha elaneleyo lokulungiselela ukufaka izicelo zembuyekezo. Ngoku, lixesha lokuba sinike inkxaso kubahlolokazi neentsapho zabo babulawayo kunye nabasebenzi mgodini abamizimba imanxeba-nxeba zimbumbulu emva kwale ntlekele yasemarikana ukuba bafumane imbuyekezo.
Amaxhoba amaninzi axhatshazwa ngamapolisa namalungelo alamaxhoba anyhashwayo ngexesha le apartheid, afa elinde imali yembuyekezo kwakunye nokulungiswa kwesimo, abaninzi basalindile.
Asizukuncama, kude kubekho imbuyekezo ngobundlobongela obenziwayo ebantwini abamnyama.
Mongameli Zuma noMphathiswa wamaPolisa uMnu. Nhleko
Thina ababhalwe ngezantsana, siza kuwe sicela ukuba kulungiselelwe isicelo esifakiweyo sembuyekezo yama-326 yabo bebexhomekeke kwabo baswelekayo, ngokondliwa, abangasenayo indlela yokuzisa ezibhedlela, nokuphatheka kakubi emphefumlweni. Njengokuba sekutshiwo kwisicelo esifakiweyo, "ukuziphatha kwamapolisa bekuchasene nomthetho, nemimiselo kwakunye nemiyalelo eyanikwayo ngomhla wama-16 Agasti. Ukuziphatha kwamapolisa kwakungalunganga kwaye kungenankathalo. Ukuba bekungeko kuziphata kakubi nokungabi nankhathalo kwamapolisa, intlekele yesibini eyenzekayo ngeyingazange yenzeka nabo baswelekayo ngebangazange basweleke" itsho ingxelo ngokwamaphepha afakwe ku Mnu. Nhleko asuka kwi- Socio Economic Rights (SERI) kwakunye neWits Law Clinic . Siphinde sixhase isimemelelo sokubuyekezwa kwabasebenzi mgodini .
Brian Beamish obekekileyo(uSihlalo we Lonmin)
Udiziwe ngokunyebelezisa izimali ukuya eBermuda khona ukuze ungabhatali irhafu, ungafezekisi izithembiso zakho ze-mining charter kwaye ungabuyekezi iintsapho zabasebenzi nabasebenzi- thutyana ababulawelwa umrholo ongcono emveni kokuba ngcikiva iiminyaka. Sinyanzelisa ukuba ujonge zonke izicelo ezifakiweyo kwaye ubuyekeze njengokuba kunyanzeliswa,ngephanyazo!
 Zuma fast-tracks compensation for Marikana families RDM News Wire 29 September 2015
uRhulumente uthembise ukuqala iingxoxo ngokubuyekezwa kwabahlolokazi, iintsapho kwakunye nabasebenzi mgodini abasinda kwintlekele yaseMarikana. Njengoko uMongameli Zuma ejongeka ngathi ufuna imbuyekezo ekhawulezileyo, kufuneka sixhase isimemelelo sembuyekezo ekhawulezileyo negcweleyo.
Noluthando Rotwane signed 2016-01-14 17:47:17 +0200